Fatratra tokoa ny endrika ary mino sy manantena isika fa dia hazoto hianatra mafy ireo ankizy voakasik’izany. Mety hisy mihitsy ary ny avy aty an-drenivohitra no hifindra toerana ho any Toamasina hamonjy ireo trano meva miloko volom-boasary ary ny tokontany tsara voatra. Tsy adino mantsy fa any koa no hisy ny moron-dranomasina tahaka an’i MIAMI atsy ho atsy!
Fahalalana fa tsy trano fotsiny
Tsy sanatria manakiana kosa nefa fa mahatsiaro manana andraikitra ihany manoloana ny zava-marina. Tsy ny trano tokoa mantsy no mitondra fahalalana sy fandrosoana fa ny zavatra ampianarina ny ankizy. Akory anefa ny fahatairana fa tsy hita tao anatin’ny IEM ny fanamboarana ny rafi-pampianarana eto Madagasikara. Dia mbola hijanona amin’izao fampianarana lany andro sy manjanaka toe-tsaina izao foana ve isika ? Raha jerena ireo TAJEFI sy ny KAJY dia hita fa manidina sy mandao tanteraka ny zavatra tena ilaina sy ny zava-misy eto amintsika. Taiza ho aiza tokoa moa no niresahana fa manana harena an-dranomasina lehibe isika Malagasy ? Inona avy izy ireo, ary ahoana ny fomba hitrandrahana azy ? Asa na izaho no tsy nahay na tsy noresahana mihitsy ny momba ireo nosy kely manodidina antsika (Îles eparses). Tsy lazaina intsony ny hazo sarobidy sy ireo vato sarobidy izay anjakan’ny vahiny ankehitriny.
Fanabeazana diso kajy
Raha tsy diso aho mantsy dia ny sivilizasiona grika sy ny ady lehibe voalohany sy faharoa foana no nampianarina ahy. Nanao ahoana re raha mba niresaka kely momba ireo solika misy eto Madagasikara ny fampianarana tamin’izany fotoana e ? Mety ho maro ny lasa lavitra ny Malagasy. Nanao ahoana raha mba maro ireo havantsika sy namantsika no lasa mampiasa sy mivelona amin’ireo karazana hazan-drano marobe misy amin’ny faritra misy antsika. Tsy hiteny afa tsy irony “crevette” na “concombre de mer” sy “langouste” irony isika, izay lafo vidy tokoa eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Mino isika fa efa maro be ny Malagasy no miliardera ary betsaka lavitra noho izao, ny asa niforona teto Madagasikara. Nofy tokoa angamba no ilazana izany na rediredy. Nefa rehefa mandinika kely monja dia mametra-panontaniana hoe “Nahoana tokoa moa no tsy ovaina araka ny zava-misy eto amintsika ny rafi-pampianarana ?”. Io no antony voalohany mampahantra ny Malagasy. Tsy mahalala ny zava-misy izay saro-bidy eto amintsika akory ny ankamaroan’ny Malagasy fa dia nobeazina ho mpiasan’ny sasany fotsiny ihany.